News Collection: 'म पलायन भएको होइन'
'म पलायन भएको होइन'
नेपाली सिनेमा र अभिनेता सरोज खनालबीच गाढा नाता छ । कुनैबेला नेपाल रजतपटमा यी भलाद्मी हिरोले एकछत्र राज गरेका थिए । समयको गतिमा उनी 'सपनाको देश' अमेरिका छिरे र चौध वर्षपछि पुनः जन्मभूमि फर्किएका छन् । चलचित्र 'रगत' खेलिसकेपछि उनी अमेरिका उडे । लगभग सिङ्गो नेपाली कलाकारिताको एक पुस्ता अमेरिकामा छ, तीमध्ये सरोज प्रतिनिधि पात्र हुन् । यसपटकको तिहार मनाउन आफ्नो देश फर्किएका सरोजले चलचित्र 'मानव'बाट चौधवर्षपछि रजतपट कमब्याक गर्दैछन् । अबको बीस दिनभित्र पुनः अमेरिका फर्कने तयारीमा रहेका सरोज अमेरिकी सेनामा रहेका आफ्ना छोरा इराकबाट फर्किएपछि सँधैका लागि नेपाल आउँदैछन् । मेरिल्यान्डस्थित एक चेन रेष्टुराँ केएफसी पिज्जाहटका जनरल म्यानेजर समेत रहेका अभिनेता सरोज यतिबेला काठमाण्डू छन् । उनीसँग मेरोसिनेमाले ताजा संवाद गरेको थियो ।
नेपालीको माया पाउँदा पाउँदै अमेरिका पलायन हुनुभयो नि । किन ?
वास्तवमा अमेरिका जाने योजना थिएन मेरो । सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि मात्र त्यहाँ गएको थिएँ । खासमा त्यहाँको शिक्षा र प्रणाली देखेर मात्र अमेरिका बसेको हुँ । जहाँसम्म पलायन भएको भन्ने कुरा छ त्यो सत्य होइन । म पलायन भएको छैन । मेरो हकमा यो कुरा लागु हुँदैन । नेपाली सिनेमाको क्षेत्रलाई चटक्कै बिर्सेंर अर्काको देशमा बस्न मलाई मेरो अन्तरआत्माले दिँदैन । अमेरिका रहँदा पनि मैले वर्षको चारपाँचवटा स्टेज कार्यक्रम गरिरहेको छु । कल्चरल सो गर्छु । सबैलाई समेटेर 'युनाइटेड नेपाल' नामक संस्था स्थापना गरेको छु । म नेपाल आएपछि त्यो संस्था अमेरिकामै भलाइका लागि रहन्छ । उक्त संस्थाको पहल नेपाललाई नै गर्ने हो । सबैलाई गाह्रो परेमा सहयोग गर्ने हो । त्यसकारण म अमेरिका पलायन भएको होइन ।
स्वदेश फर्कने योजना र सम्भावना कस्तो छ ?
म नेपाली चलचित्रमा फर्किइसकेँ । बिहिबारमात्र मैले एक नेपाली चलचित्र 'मानव'मा साइन गरिसकेँ । उक्त सिनेमाको कथा राम्रो लागेपछि साइन गरेको हुँ । चौधवर्षपछि पनि म आफूलाई तरुण सरोज खनाल ठान्छु र त्यही अनुसार नेपाली सिनेमामा फर्किएको हुँ । अर्को वर्ष सँधैका लागि आफ्नो देश फर्कने योजनामा छु । इराकस्थित अमेरिकी सेनामा रहेको मेरो छोरो अर्को वर्ष फर्कदैंछ र उ फर्कियो भने हामी परिवारै नेपाल फर्कन्छौ ।
चौधवर्ष अगाडिको नेपाली सिनेमा र अहिलेको नेपाली सिनेमाबीच कस्तो तात्विक भिन्नता पाउनुभएको छ ?
चौधवर्ष अगाडि जतिबेला म कि्रयाशिल थिएँ त्यतिबेला वर्षमा एकदर्जन चलचित्र मुस्किलले बन्थे । अहिले वर्षेनी सरदर पचास/साठी सिनेमा बन्छन् । पहिलेका चलचित्र गुणस्तरिय हुन्थे, अहिले संख्यात्मक मात्र छ गुणस्तर छैन । यो बीचमा अमेरिका छँदा पनि मैले चारपाँचवटा नेपाली सिनेमा हेरे। सबै क्वान्टिटी मात्र बनेका रहेछन् । विषय र प्रस्तुतिकरणका हिसाबले चलचित्र कमजोर छन् । फोटोग्राफी र संगीतमा भने तुलनात्मक रुपमा सुधार भएको छ । अहिले अमेरिकामा नेपाली सिनेमा हेर्ने दर्शकको संख्या घटिरहेको छ । जुन फिल्ममा पनि राजेश हमालले बन्दुक लिएर उफि्ररहेको देखेपछि अमेरिकाका नेपाली दर्शकलाई वाक्क लागिसकेको छ । मेकिङ प्रगति उन्मुख छैन । नयाँ कुरा देख्न पाइएको छैन ।
नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्ने अवस्था कत्तिको छ ?
मेरो हकमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो सम्भावनालाई नकार्दिन । अमेरिकाबाट फर्किएपछि निर्माण पनि गर्ने सोचमा छु । तर पछिल्ला वर्षहरुमा वर्षेनी सरदर पचास/साठी सिनेमा बनेको कुरा आफैमा राम्र्रो हो । यसले के दर्शाउँछ भने नेपाली सिनेमामा लगानीको वातावरण र अवस्था अनुकूल छ । बरु निमार्ताहरुलाई हामीले प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्छ ।
नेपाली कलाकार लगातार विदेश पलायन भैरहेको अवस्था छ । के नेपाली चलचित्रले कलाकारलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिरहेको हो ?
एक हिसाबले यो कुरा ठीक पनि हो । स्वदेशमा सुनिश्चितता र भविष्य नदेखेर थुप्रै कलाकार साथीहरु विदेश जानुभएको छ । अरुको बारेमा भन्दा चारवर्षअघि जब लोकप्रिय गायक कर्णदास जब नेपाल छाडेर अमेरिका जानुभयो निकै दुःख लाग्यो । जति दुःख आफूले नेपाल छाड्दा पनि लागेको थिएन । गौरी मल्लजस्ता प्रतिभाहरु धमाधम अमेरिका आउन लागेपछि भने नेपाली सिनेमामा 'समथिङ रङ्' छ जस्तो लाग्न थाल्यो । किनभने यो फिल्डमा कलाकारले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्नसक्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपाली चलचित्रप्रति तपाईँको दृष्टिकोण र योगदान कस्तो छ र के रहन्छ ?
कलाकारको रुपमा मैले वास्तविक र राम्रो अभिनय गरेर जनताको मन जित्ने हो । हामीसँग प्रतिस्पर्धा धेरै छ । मित्रराष्ट्रसामु हामीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ । अब सँधै अरुको सामु घुँडा टेकेर मात्र हुँदैन । यसका लागि हामी आफैले पहल गर्नुपर्छ ।
नेपाली चलचित्रको समग्र विकासका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?
प्राविधिक पक्ष ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपाली सिनेमा एउटै ट्रेन्डबाट बनिरहेका छन् । निर्माता/निर्देशकले नयाँ किसिमको ट्रेन्ड ल्याउन सक्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि आजभन्दा दसवर्ष अगाडि हिन्दी चलचित्रमा केहीपनि थिएन । उनीहरुसँग उत्कृष्ट कथा र प्रविधि पनि थिएन । पछि क्रमिक विकास गरेका हुन् उनीहरुले । यसका लागि हामीले समुन्द्रपारका मुलुकहरुमा चलचित्र देखाउने कोसिस गरौं । मुख्य कुरा चलचित्र निर्माणको अहिलेको ट्रेन्डबाट हामी हट्नुपर्छ ।
अन्त्यमा मेरोसिनेमामार्फत नेपाली चलचित्रका शुभेच्छुक फ्यान र दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुस प्रोत्साहित गरिदिनुस यो सद्भाव र करुणाले नै नेपाली चलचित्र उँभो लाग्ने हो ।